Astaanta cusub ee Taco Bell, silsiladda caanka ah ee cunnada fudud | Abuurista khadka tooska ah
Taco Bell waa a silsiladda makhaayadaha Mareykanka soo-saar aad u caan ah oo caan ah oo shaaca ka qaaday nashqadeynta astaanta cusub toddobaadkan. Waxaad horeyba u ogtahay inaan jecel nahay inaan ku soo aruurino dhamaan wararkaan naqshadeynta astaamaha cusub ee sumadda ugu muhiimsan, maadaama gadaashooda ay yihiin kuwa ugu xiisaha badan uguna xiisaha badan wakaaladaha iyo naqshadeeyayaasha.
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan calaamaddan cusub ee Taco Bell ayaa ah inay la jirtay tii ka horreysay tan iyo 1995, sidaas darteed xiisaha ayaa sii kordhaya si loo ogaado waxa ay awoodaan inay sameeyaan. la talin hal abuur leh oo la yiraahdo Lippincot iyo kooxda Taco Bell ee kooxda naqshadeynta guriga, TBD. Astaantan cusub waxay fududeyneysaa muuqaalka astaantaan iyadoo la isku dayayo in lala xiriiro kuwa cuntada yar yar.
In ka badan abuuritaanka wax gebi ahaanba asal ah, astaan ​​cusub qeex oo samee isbadal caan ah ilaa sawirka laxiriira silsiladan makhaayadaha cuntada degdega ah. Khariidadda buluugga ah, midabada casaanka iyo jaallaha ah ee isbeddellada badhtamihii 90-meeyadii way baaba'day, waxaana lagu beddelay mid ka sii badan oo la xidhiidha guduudka oo leh taabasho gaar ah oo ku taal hooska shaaracyada.
Sidoo kale, isla Taco Bell font ayaa la cusbooneysiiyay si uu ula socdo naqshadda cusub. Naqshaddii hore waxay diiradda saartay noocyo kala duwan oo gooladaha ah, halka midka hadda socdaa uu toos ugu socdo nooc madow oo la yaab leh oo ah a fontham font.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan astaantaan ayaa ah inay ogolaato habeyn dheeraad ah oo leh midabbo, qaabab iyo qaabab. Tan waxaa ka mid ah kala duwanaansho la keenay si loogu dhex daro makhaayadaha sida dawannada, xaleefyada iyo noocyo kale oo astaamo ah oo lagu arki karo aasaaska sumaddan caanka ah ee cuntada degdegga ah leh. Astaan ​​cusub oo macno leh oo isku dayaysa inay gaarto dhagaystayaasha ugu da'da yar waqtiyadan casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Kani waa astaanta cusub ee Taco Bell
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'Invision' oo loogu talagalay ka-guuritaan fudud xagga naqshadeynta iyo horumarka
Sida loo isticmaalo Burushka Rotoscope ee Adobe After Effects CC